February 2, 2020 - MM Live News
တရုတျနိုငျငံတှငျရှိသော လူနာမြားကို ကုသရနျ တရုတျနဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိရနျ ဆောငျရှကျနကွေောငျး ကွညောလိုကျပါပွီ..
အမေရိကန်အခြေစိုက် ဆေးကုမ္ပဏီ Gilead Sciences ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Remdesivir ဆေးကို U.S.မှာ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေတဲ့ လူနာကို စမ်းသပ် ကုသရာ တစ်ရက်အတွင်း သက်သာ ပျောက်ကင်းလာကြောင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရှိသော လူနာများကို ကုသရန် တရုတ်နဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါပြီ.. အဆိုပါ Remdesivir ဆေးဟာ ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် မတင်ရသေးတဲ့ ဆေးဝါး အသစ် တမျိုး ဖြစ်ပါတယ်..ထို့ကြောင့် Remdesivir ဆေးသည် Wuhan Virusကို ကုသဖို့ ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံး ဆေးဝါး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်…..။Tin Maung Hlaing unicode အမရေိကနျအခွစေိုကျ ဆေးကုမ်ပဏီ Gilead Sciences ကထုတျလုပျလိုကျတဲ့ Remdesivir ဆေးကို U.S.မှာ […]
ဖုနျးလာရငျ ” ဟယျလို ” ဆိုပွီသာ ထူးကွတာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ မသိသေးရငျ ဖတျကွညျ့ပါ…
ဖုန်းလာရင် ” ဟယ်လို ” ဆိုပြီး ထူးကြတာဘာကြောင့်လဲ…? ဖုန်းဝင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းလာတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ” ဟယ်လို” ဆိုပြီး စတင်ပြောဆိုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဟယ်လိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သိကြပါလား? ” ဟယ်လို ” ဆိုတာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနာမည်ပါ။ အဲဒီအမျိုးသမီးနာမည် သင်သိပါသလား? သူမကတော့ ” မာဂရက်ဟယ်လို” ပါ…. သူမဟာ တယ်လီဖုန်းကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူ” ဂရေဟမ်ဘယ်လဲ” ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဂရေဟမ်ဘဲလ် ဟာ တယ်လီဖုန်းကို စတင်တီထွင်ပြီးနောက် ပထမဆုံးသော စကားလုံးအဖြစ် သူ့ရဲ့ချစ်သူ” မာဂရက်ဟယ်လို” ကို ” ဟယ်လို” လို့ စတင်သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါသတဲ့။ လူတွေက ဖုန်းတီထွင်ခဲ့တဲ့ ” ဂရေဟမ်ဘဲလ် နာမည်ကို မေ့ချင်မေ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူ ” […]
ဝူဟနျရောဂါ သကျသာလာတဲ့ ဝဒေနာရှငျတဦးက လကျမ ထောငျပွနတောပါ….
၀ူဟန်ရောဂါကို ထိုင်းက ပထဆုံးအကြိမ် စိန်ခေါ်ပြီ ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို စိန်ခေါ်ပြီ February 2,2020 ၀ူဟန် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးဆက်ခံရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသူ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာတာကို လာရောက် အားပေးစကားပြောနေတဲ့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပါ။ ၀ူဟန်ရောဂါကို ထိုင်းက ပထဆုံး အကြိမ် စိန်ခေါ်ကုသလိုက်တာပါ ။ ၄၈နာရီအတွင်း သက်သာအောင် ဆေး၂မျိုးပေါင်းပြီး ကုသ ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ရောဂါ သက်သာလာတဲ့ဝေဒနာရှင်တဦးက လက်မ ထောင်ပြ နေတာဖြစ်ပါတယ် Anti-flu and AIDS drugs၂မျိုးပေါင်းပြီး ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို ၄၈နာရီအတွင်းသက်သာအောင် ထိုင်းက ကုသနိုင်ပြီ!! SAW unicode ဝူဟနျရောဂါကို ထိုငျးက ပထဆုံးအကွိမျ စိနျချေါပွီ ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈကို စိနျချေါပွီ February 2,2020 ဝူဟနျ ဗိုငျးရပျဈ […]
တရုတ်ပြည်တွင် ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာကို တိုင်းရင်းဆေးတစ်မျိုးဖြင့် ကုသ ပျောက်ကင်း…
တရုတ်ပြည်တွင် ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာကို တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကုသ ပျောက်ကင်း တရုတ်ပြည်မှာ သူတို့ တိုင်းရင်းဆေး တိုင်းရင်းသမားတော် နဲ့ ကုသလို့ပျောက်တဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် လူနာတွေ ရှိလာတယ်။ အသက်ဆုံးရှုံးတာ နည်းလာတယ်။ အခု သေဆုံးနှုံး ၂% တောင်မရှိတော့ဘူး။ ဝူဟန်ကို လူသားတွေ စ နိုင်လာပြီ။ တရုတ် တိုင်းရင်းသမားတော်တွေ လူနာကို တိုက်တဲ့ဆေး က Chuan Xin Lian တဲ့။ လဘက်ရည် ဖျော်တိုက်တာတဲ့။ ကိုယ်လည်း မနေနိုင်တာနဲ့ လိုက်ရှာလိုက်တာ… Chuan Xin Lian ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို A ndr o g rap h i […]
” သရေေးရှငျရေးမို့ပါရှငျ…ကမြကိုပေးမဖွတျရငျနပေါ၊ သမီးလေးတော့ ပေးဖွတျပါ…”
ယန်ဇီမြစ်ပေါ်ကမျက်ရည် “ကျမကိုပေးမဖြတ်ရင်နေပါ၊ သမီးလေးတော့ ပေးဖြတ်ပါ၊ သေရေးရှင်ရေးမို့ပါရှင်” Lu Yuejin ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ဝူဟန်မြို့ရှိတဲ့ ဟူဘေး ပြည်နယ်နဲ့ တောင်ဘက်က ကျန်းစီးပြည်နယ်ကို ခြားထားတဲ့ တံတားပေါ်မှာ….. အတားအဆီးဂိတ်က ရဲတွေကို ငိုယိုတောင်းပန်လျှက် ရှိပါတယ်။ မိခင် Lu ရဲတွေကို ငိုယိုပြီး အကြာကြီးတောင်းပန်နေချိန်မှာ သူ့သမီး အသက်၂၆ နှစ်ရှိ Hu Ping ဟာ တံတားပေါ်မှာ စောင်ခြုံပြီးကွေးလျှက်ရှိပါတယ်။ သူတို့သားအမိဟာ ဟူဘေးပြည်နယ် ရွာတစ်ရွာက လယ်သမားတွေပါ။ သမီး Hu Ping က ကင်ဆာဖြစ်နေလို့ ကျန်းစီးပြည်နယ်က Jiujiang မှာ ဓာတ်ကင်ဖို့ ရက်ချိန်းစေ့လို့ သွားရမယ်။ ခက်တာက ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဟူဘေးပြည်နယ်ကို ပိတ်ထားတော့ သူတို့ဘယ်လိုမှလုပ်မရ။ မိခင် Lu ဟာ […]
February 2, 2020 February 2, 2020 MM Live News
ပုံပဲကြည့်မနေနဲ့အုန်း….စာဖတ်ဖို့သတိရှိပါ… ကုန်းမြေပေါ်မှာတော့ လိပ်က ယုန်လောက် အပြေးမမြန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ ရေထဲမှာတော့ ယုန်ထက်အကူးမြန်ပါတယ်။ ကျီးကန်းက သိမ်းငှက်ကို အတုခိုးပြီး သိုးကိုသွားဖမ်းတယ်…. ကိုယ့်လက်သည်းတွေက သိုးအမွှေးမှာ ငြိနေခဲ့လို့ နောက်ဆုံးမှာ သိုးကျောင်းသားရဲ့လက်ချက်နဲ့ သေပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုမသိဘဲ လျောက်မလုပ်ပါနဲ့။ မြင်းက ကုလားအုတ်ကိုတွေ့တော့ ကုလားအုတ်ရဲ့နောက်ကျောဖုကို ရုပ်ဆိုးလွန်းလို့ဆိုပြီး လှောင်ရယ်တယ်… ကုလားအုတ်က မြင်းကို ဘာမှပြန်မပြောဘူး၊ သဲကန္တာရမှာခရီးအတူသွားတော့ ကုလားအုတ်က သဲကန္တာရကို ဖြတ်ကျော်နိုင်သွားတယ်… မြင်းကသေသွားတယ်…. မြင်းသေကိုတွေ့တော့ ကုလားအုတ်က ရယ်တယ်။ တခြားသူရဲ့ အပြင်ပန်းသဏ္ဏာန်ကို မလှောင်ပြောင် မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့၊ တစ်နေ့ သင်လည်း အရယ်ခံရတတ်တယ်။ နွေရာသီမှာ ပူပြင်းလွန်းတော့ မြင်းကျားက မြစ်ဘေးမှာ ရေသွားသောက်တယ်…. ရေမြင်း ရေထဲစိမ်နေတာတွေ့တော့ သူတောင် ရေကစားနိုင်သေးတာပဲ ငါလည်း ကစားနိုင်တယ်ဆိုပြီး မြစ်ထဲခုန်ဆင်းတယ်…. သိပ်မကြာပါဘူး […]
“ ဇှဲကပငျတောငျကွီးကို တိုငျတညျလို့ ရုပျပုံထငျရှာ ဇှဲကပငျမွမှေ သနားစရာ ကရငျမောငျနှမနှဈဦး၏ သမိုငးကွောငျး…
ယနေ့ညဇွဲကပင်တောင်အနောက်ဘက် မီးလောင်းနေပုံ (1-2-2020) ဇွဲကပင်မြေ မှ ကရင် မောင်နှမ နှစ်ဦး၏ သမိုင်း … ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ရှိ အလွန်ပင်ထင်ရှားသော ဇွဲကပင်တောင်သည်ထူးဆန်းသော ပုံပြင်လေး တစ်ပုံရှိခဲ့ပါတယ်…ဒီပုံပြင်လေးသည် “ ဇွဲကပင်တောင်ကြီး ကို တိုင်တည်လို့ ရုပ်ပုံထင်ရှား ဇွဲကပင်တောင်တန်းမှာ မိကွဲဖကွဲ ပထွေးနှိပ်စက်မူ ဖြစ်လေရာဘဝဆက်တိုင်း ကင်းလွှတ်ပျူဌာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ မိသားစုကမ္ဘာ ပိုင်ဆိုင်စေကြောင်း လိုရာဆုတောင်း သနားစရာ ကရင်မောင်နှမ ဖြစ်ပေတည်း…” ကရင် မောင်နှမ နှစ်ယောက်၏ လွန်စွာသနားစရာကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော သမိုင်းပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ သမိုင်းအကြောင်းအရ ပြောရမည်ဆိုလျှင်…….. ကရင်အမျိုးသားကြီးစဝ်ဖါ့သန့်(သိုင့်) နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ နော်ဖေါ့ယာ့် တို့တွင့် စံစေ့ဖိုးနှင့် နော်မူးဖါန် ဟုခေါ်သော သားသမီး (၂)ဦး ရှိခဲ့လေ၏ အနှစ်နှစ်အလလက ခြိုးခြံချွေတာပြီး […]
ပိတျမိခဲ့တဲ့ မွနျမာ ကြောငျးသားတှေ မန်တလေး ကနျတျောနဒီ ဆေးရုံ ရောကျပွီ…
ဝူဟန်မှာ ပိတ်မိခဲ့တဲ့ မြန်မာ ကျောင်းသားတွေ မန္တလေး ကန်တော်နဒီ ဆေးရုံ ရောက်ပြီ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသား ၅၉ ဦးဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် မနက် ၆ နာရီ ခန့်မှာ သီးသန့်ထားရှိမယ့် ကန်တော်နဒီဆေးရုံကို ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား (၆၃) ဦးအနက် (၃) ဦးဟာ အပူချိန်လွန်ကဲပြီး ဖျားနေတဲ့အတွက် ဝူဟန်လေဆိပ်မှာ ထားရှိခဲ့ပြီး (၁)ဦးကတော့ ဗီဇာအခက်အခဲကြောင့် ကျန်ရစ်နေခဲ့တယ်လို့ ကျောင်းသူတစ်ဦးရဲ့ မိဘဆီက စုံစမ်းသိရပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေဟာ မနက် ၄ နာရီဝန်းကျင်မှာ မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိပြီးအဲဒီကျောင်းသားတွေကို မန္တလေးတိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက စီစဉ်ထားတဲ့ သီးသန့် ယာဉ်တွေနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ လေဆိပ်တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်….။ သူတို့ကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှု ရှိမရှိ […]